हेटौँडा । राक्सिराङ गाउँपालिकाले डेंगु लागेका विरामीलाई यातायात र खानाखर्चबापत तीन हजार रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ । राक्सिराङ गाउँपालिकामा डेंगुको उपचार गर्ने ठूला स्वास्थ्य संस्था नभएकाले मनहरी, हेटौँडा तथा
भक्तपुर । देशभरि फैलिएको डेंगे भक्तपुरमा प्रकोपकै रुपमा फैलिँदै गएको छ । एक साताको अवधिमा जिल्लामा ९९ जना बिरामीमा डेंगे भएको पुष्टि भएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुरका अधिकृत
डेंगु संक्रमित डा.रुइतको उपचार हुँदै
काठमाडौँ । डेंगु संक्रमित नेत्ररोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डा. सन्दुक रुइतको उपचार भइरहेको छ । नर्भिक अस्पतालका एक चिकित्सकका अनुसार रुइतलाइ डेंगु भएकाले भर्ना गरेरै राखिएको छ । घरमा उनीसहित परिवारका
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समावेश गराएको छ । मानसिक स्वास्थ्यको चिकित्सकीय पक्ष र परामर्श दुवै क्षेत्रलाई पहिलोपटक आधारभूत सेवामा समावेश गरेको मन्त्रालयले
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ डेंगु संक्रमणका कारण ज्वरो बढेपछि ग्राण्डी अस्पताल भर्ना भएका छन् । मन्त्री खनालको अवस्था अहिले सुधारोन्मुख रहेको छ । मन्त्री खनाललाई
काठमाडौं । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका दुई वरिष्ठ चिकित्सक सहित ११ जना कर्मचारीलाई डेंगु संक्रमण भएको छ । अस्पतालका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेका अनुसार उनीहरूको अहिले त्यही अस्पतालमा
धादिङ । जिल्ला अस्पताल धादिङवेशीमा उपचार गराउन आउनेहरूमा डेङ्गु र ठेउला (स्क्रब टाइफस) रोगको संक्रमण देखिएको छ । ठेउलाका बिरामी बढ्न थालेपछि महामारीकै रुप लिने हो कि भनेर स्वास्थ्यकर्मीसमेत चिन्तित
दाङ । जिल्ला स्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका २५ जना डाक्टरहरुले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुको ज्यादतीका कारण आँफूहरुले काम गर्न नसकेको जनाउँदै विहिवार बेलुका उनिहरुले सामुहिक राजीनामा
रोल्पा । कसैले मानिस राज्यबाट के चाहन्छ ? भनी प्रश्न गरे, उत्तर के होला । सहजै छ । सुरक्षित आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यायात, विजुलीबत्तीलगायत । र, हाे पनि ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका तीन जनाको नाम सिफारिस भएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको हो । शिक्षा मन्त्रालयका